Ingiriiska Oo Uga Digay Muwaadiniintiisu In Ay Booqdaan Gobolka NFD – Heemaal News Network
Ingiriiska Oo Uga Digay Muwaadiniintiisu In Ay Booqdaan Gobolka NFD
Walaac badan ayey muujineysaa dowladda Ingiriiska kadib markii ay digniin gaarsiiyen muwaadiniintooda u safraya dalka Kenya, waxaana loo sheegay qof walba inuu taxadar badan muujiyo mudada uu halkaas joogo.
“Muwaadiniinteena ku sugan wadanka Kenya waa ineysan u dhawaan xadka ay wadaagaan wadamada Kenya iyo Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca waqooyi bari Kenya, waa iney 60KM masaafo dhan u jirsadaan, sidoo kale muwaadin walba oo u dalxis tagaya gobolka xeebta waa inuu xuduuda ka fogaado ku dhawaad 15 KM” ayuu u qornaa war qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Ingiriiska.
Sidoo kale warka qoraalka ah ee wasaraadda kasoo baxay waxaa lagu sheegay iney jirto halis badan oo halkaas laga qorsheynayo.
“Waxaa laga yaabaa in Argagixisada ay isku dayaan weeraro ay ka fuliyaan Kenya, hanjabaado saa’id ah ayaa ka soo yeeraya, waxaana ku jira hawlo argagixiso iyo afduubyo laga sameynayo gudaha Kenya”
Dowladda Ingiriiska waxaa aad u cabsi galiyay qorshayaal ay maqleen oo tilmaamaya in kooxaha ay beegsanayaan goobaha ajaanibta ku badan yahiin, waana midda keentay in qoraalka wasaaradda lagu muujiyo.
“Waa suuragal iney weeraro ka dhacaan goobaha ay ku badan yahiin dadka ajaanibta ah sida xeebaha, dhismayaasha dowladeed, gawaarida gaarka ah ee garoomada, xafladaha, dukaamada, hoteelada, goobaha ciyaaraha lagu fiirsado iyo meelaha lagu caweeyo”
Walaaca dowladda Ingiriiska ayaa yimid kadib weerarkii ay sheegteen Al-Shabaab ee ka dhacay Lamu gaar ahaan xefada Mandha Bay, waxeyna cabsi badan ka qabaan in muwaadiniintooda ay la kulmaan weeraro kale oo ka dhaca Kenya.
Ugu dambeyntii dowladda Ingiriiska waxey ka mid tahay dowladaha saaxiibka ugu fiican la ah Kenya.
Xukuumada Biixi Oo Xabsiga kasii Daysay Tafatirihii HC-tv Oo Mudo U Xirnaa.
Sarkaal Ka Tirsan Alshabaab Oo Isku Soo Dhiibay CXDS